काठमाडौँको पेप्सीकोलामा प्रहरीले गोली हान्यो, एक घाइते ! – Nepali Audio Video
काठमाडौँको पेप्सीकोलामा प्रहरीले गोली हान्यो, एक घाइते !
प्रहरीले काठमाडौंको पेप्सीकोलामा गोली हानेर रामेश्वर गौतमलाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले पेप्सीकोलामा चलाएको गोली लागेर गौतम घाइते भएका छन्। उनको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
गोली गौतमको दाहिने घुँडा मुनी लागेको छ । गौतम काठमाडौं उपत्यकाको लागि नयाँ नाम भएपछि एसएसपी लोहनीले उनी पछिल्लो समय चक्रपथ क्षेत्रमा संगठित आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा पटक पटक पक्राउ पर्दै आएका चक्रे मिलन समूहका सक्रिय सदस्य रहेको दाबी गरे।
गौतम काठमाडौंको पटके अपराधी रहेको र पछिल्लो समय चक्रे समूहको मुख्य सहयोगीको रुपमा विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको उनको दाबी छ। ‘गौतमले भदौमा मात्र ४ वटा आपराधिक घटना गराएको सूचना प्रहरीसम्म आएको छ,’ लोहनीले भने‘ उसको पृष्ठभूमि केलाउँदा पटके अपराधी रहेको खुलेको छ।’ डेढ महिना अगाडि ललितपुरको कुसुन्तीमा महाशाखाको टोलीले चलाएको गोली लागेर प्रविण खत्रीको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले लागूऔषधको कारोवारीको दावी गरे पनि उनी सामान्य प्रयोगकर्ता रहेको खुलेपछि प्रहरीको ओलचना भएको थियो।
यस अगाडि महाशाखाको गोली लागेर उपत्यकाका कहलिएका गुन्डा दिनेश अधिकारी चरी र कुमार घैटे मारिएका थिए ।
शुक्रबार, अशोज ६, २०७४ मा प्रकाशित